Fahafahana mamokatra - BXL Creative Packaging
Niorina tamin'ny taona 1999, BXL Creative dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana sy famokarana fonosana ao Shina.
Tsena lehibe: Etazonia, Kanada, Frantsa, Alemana, Italia, Korea atsimo, ary Moyen Orient.
Indostria lehibe: hatsaran-tarehy, hatsaran-tarehy / makiazy, fikolokoloana hoditra, ranomanitra, labozia manitra, hanitra an-trano, sakafo / famenon-tsakafo, divay sy fanahy, firavaka, vokatra CBD, sns.
Sokajy vokatra isan-karazany: boaty fanomezana vita amin'ny tanana vita pirinty, paleta fanaovana makiazy, poketra, varingarina, kapoaka, polyester / kitapo tote, boaty / tavoahangy plastika, tavoahangy / siny fitaratra. Ny momba ny fonosana namboarina rehetra.
Masinina fanontam-pirinty Heidelberg 4C
Ny milina fanontam-pirinty offset Aleman Heidelberg CD102 dia mampitombo tokoa ny fahafaha-mihetsika amin'ny fitaovana, miaraka amina famoahana eo ho eo boaty vita tanana 100 000 sy boaty baoritra 200.000 isan'andro, izay miantoka tsara ny vokatra famonosana.
Masinina fanontana Manroland 7 + 1
Natao manokana ho an'ny famokarana pirinty manana kalitao avo indrindra, indrindra ho an'ny taratasy mylar, taratasy perla ary karazan-taratasy manokana hafa izay sarotra tanterahina amin'ny fahombiazan'ny loko ambony. Ity milina ity dia manarona azy rehetra.
Atrikasa tsy misy vovoka
Mba hahazoana antoka kokoa ny kalitaon'ny vokatra, fitaovana manokana atrikasa tsy misy vovoka ny orinasa.
Fitsapana hafanana, fitsapana mitete, sns, manomboka amin'ny fisafidianana fitaovana ka hatramin'ny fanaraha-maso ny famaranana ny vokatra vita, ny fanandramana lozisialy 108 node fanaraha-maso mba hiantohana ny kalitaon'ny fonosana tsirairay.